Chii chinonzi AWS Certification? Rwendo rweAWS Training Courses | ITS Training
Chii chinonzi AWS certification?
Rwendo rweAWS Training Courses & Certifications
AWS – Solutions Architect :
AWS Kupa Kubatanidza-kuyananisira zvidzidzo & Kudzidzira Kosi yeZviso Architects, SysOps Administrators & Developers. Innovative Technology Solutions inopa Professional-level certifications for Solutions Architects & DevOps injini panzvimbo yeAWS.
Inzira yeAWS Business Essentials yakagadzirirwa kukubatsira kuti unzwisise zviri nani gore reAWS, nechinangwa chawakanyatsogadzirira kuongorora uye kukudziridza sarudzo yokusarudza gore. Nyaya yacho inotaura pamusoro pezvakakosha zveAWS uye kumusoro kwegore computing kune bhizimusi rako, kusanganisira kuchengeteka, nemari yakabatana zvakanakira. Inopa zvirongwa zvekuberekwa kwemafuta ane zvibereko, inotarisa kushandura sangano reIt uye zvikamu zvekuwana, uye rinongororai kuti maAWS mazano anokwanisa kuchinja sei mari yekuita mari inodzokorora. #AWS Training
IAWS Certified Solutions Architect - Chikwata chekubatanidza chinorongerwa vanhu vane ruzivo rwekugadzirisa kushandiswa kwezvidzidzo uye zvirongwa pane pepa AWS. Ongorora pfungwa iwe unofanirwa kunzwisisa nokuti kuongorora uku kunosanganisira: Kugadzira uye kuendesa kushandiswa kwezvinhu, kufambidzana, uye kukanganiswa kwemapurogiramu paAWS. #AWS Certification
Kugadzirisa paAWS kunosanganisira zvivako zvekuvaka IT infrastructure pamusoro peAWS. Dzidzo yacho inoratidzira kuratidzira kuronga maitiro ekufambisa kushandiswa kweAWS Cloud nekunzwisisa mazano eAWS uye kuti masangano aya anokodzera sei mu-cloud-based arrangements. Dzidzo iyi inokurudzira AWS gore rakanakisisa miitiro uye mienzaniso yakarongeka yezvirongwa kubatsira rubatsiro zvakanyatsofungisisa nzira yekugadzirisa zvakanakisisa zvirongwa zveAWS. Kuongorora kwepfungwa yose kuburikidza nedzimwe nzira inoratidza kuti vamwe vashandi veAWS vakatsanangura sei zvivako uye maitiro uye maitiro avanoita. #AWS Training Courses
Click kugoverana musi Google+ (Unozaruka pahwindo itsva)
Kutarisira gore ne Chef Automate uye AWS
Nei Chiratidzo cheAWS Chikosha? AWS Akavhenekerwa Developer Developer Salary muDhora